unzima emndenini obhidlikelwe yindlu - Ilanga News
Home Izindaba unzima emndenini obhidlikelwe yindlu
unzima emndenini obhidlikelwe yindlu
Bacela noma ngubani ongaba nosizo, alekelele
UMNDENI wakwaSibisi umi ngaphandle kwendlu yawo edilizwe yizimvula.
SIBI isimo emndenini wa-kwaSibisi eSnathingi, eMgungundlovu, njengoba indlu ebivele ingekho esimeni esihle obufihla kuyona amakhanda idilizwe yizimvula ezinamandla ngesonto eledlule.
UNkz Samkelisiwe Sibisi (34), okunguyena oseyinhloko yalo muzi onamalungu awu-7, uthi kwale kancane ukuba balimale ngoba indlu idilike bephakathi.
Uthi kudilike amagumbi amabili, elokuhlala nelokuphekela, kwasala amanye amabili okulala kodwa okungelula ukuqhubeka bawasebenzise.
“Kwawona lawa asele kawathembisi nhlobo, anemifantu emikhulu kakhulu kanti naphezulu utha-yela usuvuza kakhulu uma lina. Siyesaba ukuqhubeka sisebenzise la magumbi asele ngoba isimo sawo sibi kangangokuthi asengawa ngisho libalele,” kusho uNkz Sibisi.
Uthe kumanje bakhoseliswe ngumakhelwane wabo onendlu yomxhaso engasetshenziswa njalo.
“Le ndlu ngeyelinye ilungu lomndeni wakhe (umakhelwane) elihlala kude nasekhaya ngenxa yomsebenzi. Uthe uma ethola ukuthi sidilikelwe, wathi masize ekhaya lakhe sisebenzise lo mxhaso okwesikhashana sisahlanganisa izinto,” kusho uNkz Sibisi.
Uthi okubuhlungu wukuthi kalikho iqhinga lendlela eya phambili abanalo ngoba kabanayo imali eyanele ukuthi bavuse indlu yakubo masishane.
“Kangisebenzi futhi sekunesikhathi ngingasebenzi. Nakuba silala sidlile yingoba sisizwa yimali yesibonelelo sikahulumeni sezingane zami ezimbili ezingamawele.
“Ngiyamdinga ngempela umSamariya olungileyo ongangenelela esimeni esibhekene naso ngoba ngeke sihlale endlini kamakhelwane isikhathi eside. Uma ebuya umnikazi wayo sizoba nenkinga,” kuchaza uNkz Sibisi.
Uthi ikhansela lendawo libikelwe ngalolu daba, kodwa kalanga-thembisa ukuthi bangahle baluthole nini usizo olufana nokudla, izingubo zokwembatha nendlu.
“Lithe liyasibona isimo, lizozama ukusitholela usizo kuMasipala waseMsunduzi. Lithe akulula ukuthi lisho ukuthi singakanani isikhathi esizosilinda ngaphambi kokuba siluthole usizo ngoba ukubhaliselwa kosizo kunemidanti eholela ekutheni lungasheshi ukufika kulowo osuke eludinga masinyane,” kuchaza uNkz Sibisi.
Lithintwa ikhansela, uMnu Nkosinathi Mbanjwa, livumile ukuthi linalo ulwazi ngokwehlele umndeni wakwaSibisi kanti liphezu kwezinhlelo zokuwutholela usizo oluphuthumayo olufana nokudla.
“Ngibafake ohlelweni lwamaphasela okudla azohanjiswa enda-weni maduze. Ngithe mangibafake kulolu hlelo ngoba lona lunamaphasela amakhulu azokwazi ukuqhuba umndeni isikhathi eside,” kuchaza uMnu Mbanjwa.
Uthe okokuthi lo mndeni wa-khelwe indlu, nakho kuzodingidwa.
Okhulumela uMasipala wase-Msunduzi, uNkz Thobeka Mafumbatha, uthe udaba lwesicelo salo mndeni sokwakhelwa indlu yo-mxhaso luzophenywa bese uthola usizo olufanele.
Previous articleU-VVO USENQUME UKUZAKHELA IZIFONYO NEZIHLAMBI-ZANDLA
Next articleJabulile Nxumalo